မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာပြည် ၀င်ပြိုင်သင့်ပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံ ဆိုတာက အားကစားဝတ်စုံတခုပါပဲ။
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်စံချိန်မီဖို့နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းဖြေနိုင် ပြောနိုင်ဖို့ပဲလိုတာပါ။
တကိုယ်လုံးကြွလို့ မူယာကကြွယ်၊ မြောက်ကျွန်းအလှနဲ့ ပြိုင်ချင်စမ်းတယ်။
တကယ်မဖယ် ဒင့်စိတ်ထဲဝယ် မြင်ချင်ပါရဲ့ကွယ် ။
မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲ မြန်မာဝင်နွှဲမှဖြစ်မယ်။
အစိုးရလည်းကြိုက်၊ ရိုးရာလည်းထိမ်းပြီးသားဖြစ်အောင် ချိတ်ထမီအစကို ရေကူးဝတ်စုံ ချုပ်ဝတ်ပါ။
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဘီကီနီ ဆိုတာလည်း ခွဲခြားလို့ မရပါ။
မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာပြည်က၀င်နိုင်တဲ့ အဆင့်မှီပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံ လက်တစ်ဝါးစာလောက်ကတော့ အေးဆေး ပြိုင်ကြလိမ့်မယ်။
မပူပါနဲ့။ မယုံရင် မောင်စေတန်ဘလော့ဂ်မှာ သွားကြည့်ပါလား။ အဆင့်ကိုမှီနေတာပဲ။
တခြားအားကစားတွေလိုမျိုး စစ်တပ်က ဒါမှမဟုတ် အစိုးရက ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ ၀င်မပါရင်တော့ ၀င်ပြိုင်သင့်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာရယ်လို့ ကောင်းသော ဂုဏ်ပြုမှုခံရမယ်ဆိုရင်တော့ မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲ ဆိုတာကိုလည်း ၀င်ရောက်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။
ဘရဏီ၊ ဒီဗွီဘီ လူငယ့်အသံ
လက်တ၀ါးသာသာဝတ်စုံနဲ့ဆိုရင် မြန်မာမလေးတွေ ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်း ကျနော်တို့ချည်း သိနေလို့ ဘယ်ပြီးမလဲဗျ။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ခေတ်အလိုက် အချိန်အလိုက်ပြောင်းတာပါ။
အပြောင်းအလဲကို လက်မခံနိုင်တာဟာ မှားယွင်းမှု တခုလို့ ထင်ပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အ၀တ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ရင် တချိန်ချိန်တခါခါမှာ မြန်မာတွေ ယူဆ လက်ခံသလို လက်ခံကြပါတယ်။
Ronald အောင်နိုင်၊ စာနယ်ဇင်းသင်တန်းဆရာ
ပြိုင်ပွဲတခုပါ...။ သို့ သော် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမူ့ ကိုထိန်း
ကိုယ်ဖေါ်မှ ဆုရမယ့်ပြိုင်ပွဲမျိုးကို ၀င်မပြိုင်သင့်ပါဘူး။
လူကြီးမင်းတို့ တွေမှာ သားသမီးတွေရှိမှာပါနော်...
Please don't be too conservatives. Open you mind. By wearing swimming suits doesn't mean that wearing nude on public place. In fact, wearing Myanmar cultural dress and kept women for someone should be ashamed for.
Bo Bo said... :
မယ်စကြာဝဠာ ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာပြည်က ၀င်မပြိုင်သင့်ပါဘူး။
ယဉ်ကျေးမှုကို မထိခိုက်ပါဘူး ဆိုတာ မမှန်ပါ။
အပေါ်ကလူရေ.....ဘုန်းကြီးတွေကိုသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်တာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုလား..မြန်မာ အထက်တန်းလွှာ လင်တွေ အပြိုင်ယူကြတာကိုမြန်မာ.ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လာ..
မင်းညီမကို အယင်မေးအုံး ယဉ်ကျေးလားလို့
နှဗူးတယ်ဆိုတာ...ခံစားတဲံ့သူနဲ့ ပဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်.
မြန်မာပြည်မှာလဲ အရင်က မယ်
ပြိုင်ပွဲမှာ..ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့ ပါတယ်...အရည်အချင်းပြည့် စုံရင် ပြိုင်သင့် ပါတယ်.
ထမီရငျလြားနဲ့ ရကေူးကနျမှာ ရကေူးပွိုငျဖို့ ညှနျကွားသငျ့ပါတယျ။
နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခု အနေနဲ့ ပြိုင်နေကြတာပါ..
မူဆလင် အင်ဒိုနီးရှားတောင် ပြိုင်ခိုင်းသေး။http://www.youtube.com/watch?v=Tn5gmt0Obcs
ယဉ်ကျေးမှု...ယဉ်ကျေးမှု နဲ့လူကြားကောင်းအောင်ဟစ်။ ပြီး သူတို့ပဲ သူများ သားသမီး အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေကို ခြေတော်တင်
saiyannoe said... :
@ one who insult longgyi and khone
Do not insult the culture. The rudeness is doing sin or insulting with bad opinion. Wearing longgyi and eating khone are not shameful case. It is our culture. Stop insulting our culture. U MUST GIVE RESPECT TO CULTURE.
Ghost said... :
နှာဗူးလို့ ပြောတဲ့သူက သူကိုယ်တိုင်ကိုကဗူးချင်လို့ နေမှာပါပြိုင်တာကစည်းကမ်း
Judging people you don't know for things you don't understand is just really stupid
ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်မှာရင်သား တစ်ဝက်လောက် ဖော်တာကို ၀ိုင်းပြီး ပြောကြတယ်၊ ဒီလို ကမ္ဘာသိ ဘီကီနီကို အသိုင်းအ၀ိုင်းက လက်ခံတယ်လို့ ယူဆလိုက်ရင် အခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်မှာ ဘီကီနီနဲ့ မြန်မာကမ်နမ်စတိုင် ကဲကြမှာ မြင်ယောင်သေးတော့တယ်။
တိုးတက်မှုမှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုပါ။ အတွေးအခေါ်၊ ခံယူချက်၊ အသိအမြင်နဲ့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းစတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုမရှိသေးခင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင်တိုးတက်မှုကိုပဲ အဟုတ်မှတ်နေကြရင် မြန်မာပြည်မှာ အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်းမမီသေးတဲ့ မိန်းမတွေ လူလယ်ခေါင်တွေမှာ ဘီကီနီနဲ့ လမ်းသလားကြတော့မလားလို့ တွေးမိတယ်။
လူ့အလွှာတစ်ခုလုံး စိတ်ဓာတ် အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာကြပြီးရင် ကျန်တာ ဘာလုပ်လုပ် သူ့ကိစ္စပဲ။ အခုချိန်မှာတော့ သူ့ကိစ္စတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ သူ့ကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့လဲ သူ့လိုအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့။ ဘီကီနီနဲ့ လမ်းသလားတာ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ ကမ္ဘာသိတောင် မြန်မာက လုပ်ပြနေသေးတာပဲ ငါတို့လဲ ငါတို့အလှအပကို ပုရိသတွေ သရေကျအောင် လုပ်ပြရမယ်လို့ ခံယူကြလိမ့်မယ်။